Johani 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
14 “Musarega mwoyo yenyu ichinetseka.+ Tendai muna Mwari,+ tendaiwo mandiri.+ 2 Mumba maBaba vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara.+ Dai zvisina kudaro, ndingadai ndakuudzai, nokuti ndiri kuenda kunokugadzirirai nzvimbo.+ 3 Uyewo, kana ndikaenda, ndikakugadzirirai nzvimbo, ndichadzokazve+ uye ndichakugamuchirai kumba kwandinenge ndiri,+ kuti pandinenge ndiri imi muvepowo.+ 4 Munoziva nzira yokwandiri kuenda.” 5 Tomasi+ akati kwaari: “Ishe, hatizivi kwamuri kuenda.+ Nzira yacho tinoiziva sei?” 6 Jesu akati kwaari: “Ndini nzira+ nechokwadi+ noupenyu.+ Hapana anouya kuna Baba asi nokwandiri.+ 7 Kudai makanga mandiziva, mungadai makazivawo Baba vangu; kubvira panguva ino munovaziva uye makavaona.”+ 8 Firipi akati kwaari: “Ishe, tiratidzei Baba, uye zvinotikwanira.” 9 Jesu akati kwaari: “Ndave ndinemi kwenguva refu kwazvo, asi, Firipi, hausati wasvika pakundiziva here? Aona ini aonawo Baba.+ Zvino sei uchiti, ‘Tiratidzei Baba’?+ 10 Hautendi here kuti ndiri pamwe naBaba uye Baba vari pamwe neni?+ Zvinhu zvandinokutaurirai handizvitauri ini pachangu; asi Baba vanoramba vari pamwe neni ndivo vari kuita mabasa avo.+ 11 Nditendei kuti ndiri pamwe naBaba uye Baba vari pamwe neni; kana mukasadaro, tendai nokuda kwemabasa oga.+ 12 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Uyo anotenda mandiri, iyewo achaita mabasa andinoita; uye achaita mabasa makuru+ kune aya, nokuti ndiri kuenda kuna Baba.+ 13 Uyewo, zvose zvamunokumbira muzita rangu, ndichazviita, kuti Baba vakudzwe pachishandiswa Mwanakomana.+ 14 Kana mukakumbira chimwe chinhu muzita rangu, ndichachiita. 15 “Kana muchindida, muchachengeta mirayiro yangu;+ 16 uye ndichakumbira Baba uye vachakupai mumwe mubatsiri kuti ave nemi nokusingaperi,+ 17 iwo mudzimu wechokwadi,+ uyo nyika isingagoni kugamuchira,+ nokuti haiuoni kana kuuziva. Imi munouziva, nokuti unoramba uinemi uye uri mamuri.+ 18 Handingakusiyii marasikirwa.+ Ndichauya kwamuri. 19 Munguva pfupi, nyika haichazondioni,+ asi imi muchandiona,+ nokuti ndiri mupenyu uye muchava vapenyu.+ 20 Pazuva iroro muchaziva kuti ndiri pamwe naBaba vangu uye imi muri pamwe neni uye ini ndiri pamwe nemi.+ 21 Ane mirayiro yangu akaichengeta, iyeye ndiye anondida.+ Uyewo anondida achadiwa naBaba vangu, uye ndichamuda uye ndichazviratidza pachena kwaari.” 22 Judhasi,+ asiri Iskariyoti, akati kwaari: “Ishe, chii chaitika zvokuti munoda kuzviratidza pachena kwatiri asi kwete kunyika?”+ 23 Achipindura, Jesu akati kwaari: “Kana munhu achindida, achachengeta+ shoko rangu, uye Baba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari togara naye.+ 24 Asingandidi haachengeti mashoko angu; uye shoko ramuri kunzwa harisi rangu, asi nderaBaba vakandituma.+ 25 “Ndataura zvinhu izvi kwamuri ndichiri nemi. 26 Asi mubatsiri, iwo mudzimu mutsvene, uchatumirwa naBaba muzita rangu, iwoyo uchakudzidzisai zvinhu zvose nokukuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakakuudzai.+ 27 Ndinokusiyirai rugare, ndinokupai rugare rwangu.+ Handirupi imi sokurupa kunoita nyika. Musarega mwoyo yenyu ichinetseka kana kuirega ichipera nokutya. 28 Manzwa ndichiti kwamuri, Ndiri kuenda uye ndichadzoka kwamuri. Kudai maindida, maizofara kuti ndiri kuenda kuna Baba, nokuti Baba vakuru+ kwandiri. 29 Naizvozvo zvino ndakuudzai zvisati zvaitika,+ kuti, pazvinoitika, mutende. 30 Handichataurizve zvizhinji nemi, nokuti mutongi+ wenyika ari kuuya. Asi haana simba pandiri,+ 31 asi, kuti nyika izive kuti ndinoda Baba, Baba zvavakandipa murayiro+ wokuita, ndizvo zvandiri kuita. Simukai, ngatibvei pano.